Inona no atao hoe quercetin? Quercetin (117-39-5) dia an'ny vondrona fitambarana antsoina hoe flavonoid. Ny anarany simika dia 3, 3 ′, 4 ′, 5,7-pentahydroxyflavone. Izy io dia pigment izay misy voajanahary amin'ny legioma, voankazo ary voamaina ary anisan'ny manohitra ny fihinana. Quercetin dia azo alaina amin'ny endrika kapsule ary koa amin'ny endrika vovoka ho… Continue Reading
2019-12-04 wisepowder Category hafa